China Hetrọlị vinyl ụlọ ọrụ na ndị na-ebu ya | Linsu
Pvc mgbochi ileghara mkpokọta steepụ warara
Hospitallọ ọgwụ vinyl dị ọcha na-acha ọcha
Anti-static conductive vinyl mpempe akwụkwọ
Etelọ vinyl dị iche iche
Ximalaya PVC ụlọ ọgwụ vinyl flooring
Hetrogeneous vinyl n'ala dị na otutu n'ígwé site a pụrụ iche usoro na-emekarị site n'elu na ala ise n'ígwé, ha UV mkpuchi oyi akwa, na-eyi oyi akwa, na-ebi akwụkwọ oyi akwa, iko eriri oyi akwa, elu ekwedo oyi akwa ma ọ bụ elu njupụta kọmpat oyi akwa na azụ akara oyi akwa.
Atụmatụ nke ngwaahịa.
1. Nsogbu na-eguzogide, iyi-eguzogide, mgbochi ikiri ụkwụ.
2. Mgbochi na-amị amị, ọkụ ọkụ, mmiri na-adịghị.
3. -da olu na-ada ụda ma na-ada ụda.
4. Enweghị nsogbu ịgbado ọkụ, mfe splicing, ngwa-ewu.
5. Na-esighi ike acid na alkali corrosion resistance.
6. Omume ọkụ na ikpo ọkụ, nguzogide nsị.
7. Anti-ayodiin, mgbochi static.
Heterogeneous vinyl n'ala mpịakọta
Ọnụ ike dị omimi nke esemokwu
Ọkpụrụkpụ: 2mm, 3mm
A na-anwale ngwaahịa anyị ọtụtụ oge tupu na mgbe emechara, iji hụ na ngwaahịa ngwaahịa a nwere ike ị nweta ọkwa mba ụwa.
Ihe karịrị patters 500
Vlọ vinyl dị iche iche nwere ike iguzogide nnukwu okporo ụzọ na nsị maka ụlọ ala na-adịghị ala ala zuru oke maka nlekọta ahụike na gburugburu agụmakwụkwọ, dịka ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ, nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ ọrụ wdg
700000 Square mita guzo na ngwaahịa
Nke gara aga: Ximalaya PVC ụlọ ọgwụ vinyl flooring
Osote: Nondirectional Vinyl Ft Roll